Izindaba - Isithombe seqembu sabanye babasebenzi
Imenenja jikelele uWu Yunfu wethule inkulumo emukelekile engqungqutheleni. Wemukele ngemfudumalo kuzo zonke izivakashi futhi wababonga ngokuxhasa kwabo isikhathi eside ekuthuthukisweni kweLujury, futhi wethula isimo sentuthuko esikhona manje nokuhlelwa kwesikhathi esizayo kweLujury ngendlela ebanzi futhi enemininingwane.
Imenenja jikelele uWu Yunfu wenze inkulumo
UWu Yunfu uthe: Inhloso yokubamba isithangami sekhwalithi yabaphakeli sesithathu ukudlulisa imibono yethu, ukulalela iziphakamiso zakho, ukunqoba ukwesekwa kwakho, ukubeka phambili izidingo zethu, ukujulisa imizwa yezinhlangothi zombili ukufeza isimo sokuwina.
UWu Yunfu uveze ukuthi selokhu yasungulwa, uLujury ubelokhu ekholelwa ukuthi "ikhwalithi iyisisekelo sebhizinisi" iminyaka eyi-18, futhi wakhe ubungani obujulile nabalingani bakhe. Ngemizamo nokwesekwa kwabahlinzeki, kuye kwamukelwa imikhiqizo eminingi edumile yemoto kagesi, efana ne-AIMA, LIMA, LUYUAN ne-SLANE. Njengamanje, uLujury ubeke phambili isiqubulo esithi "ukudala ikusasa ngenhliziyo". Sizimisele ukuqhubeka nokusebenza ngokubambisana nabalingani bethu ukufuna ikusasa. inkathi entsha nohambo olusha, sizohlala sakha ubukhazikhazi obusha.
IPhini leMenenja-jikelele uZhang Juqin ubehambele lo mhlangano
Mayelana nokuthi ungazibona kanjani izinzuzo ezihambisanayo nokubambisana kwe-win win, uWu Yunfu uphakamise ukuthi abahlinzeki kufanele balinganiswe ngezindlela eziningi.
Okokuqala, isikhathi sokulethwa: ukufika ngesikhathi kwezinto zokwenziwa kungumfanekiso wobuqotho bebhizinisi. Ukhiye wokubambisana kwe-win-win ubuqotho.
Okwesibili, ikhwalithi: Qinisa ukulawulwa kwekhwalithi yomkhiqizo wangaphambili wefektri futhi wehlise imvamisa yembuyiselo.
Okwesithathu, insizakalo: Thuthukisa ikhwalithi yesevisi ngokuya ngamaqiniso.
Okwesine, ukuthuthukiswa komkhiqizo omusha: Ukuqanjwa kwesayensi nobuchwepheshe kungamandla okuthuthukisa ukuthuthukiswa kwamabhizinisi, futhi i-R & D idinga ukubambisana, futhi ukuqamba okusha kuzoshukumisa ukubonakala kwesimo sokuwina.
Umqondisi wezobuchwepheshe uPeng Hao wethula inkulumo
UPeng Hao uchaze ngekhwalithi yezobuchwepheshe evela kula maphuzu amathathu alandelayo, okuyisevisi, ukuqamba kanye nekhwalithi.
Okokuqala, insizakalo. Cishe zonke izinkampani ezivelele zibheka insiza njenge "ndlela yokuphila" yokusinda kwebhizinisi. Noma iyiphi inkampani engayinaki insizakalo futhi ehluleke ukwanelisa izidingo zamakhasimende isizokwehla.
Okwesibili, ukuqamba. Usuku olusha lwenza usuku olusha. Ukuqinisekisa intuthuko nokusebenza okuqhubekayo, amabhizinisi kufanele azivuselele njalo.
Okwesithathu, ikhwalithi. Ukuthuthuka okuhle, amabhizinisi kufanele agcizelele ukubaluleka kwekhwalithi yomkhiqizo, nokuyimpilo yezinkampani. Ngaphandle kokwethembela kwamakhasimende kukhwalithi yomkhiqizo, impilo yezinkampani izofinyezwa.
UWu Yuqun, uNgqongqoshe Wezokulawulwa Kwezinto wenze isitatimende.
Lo mhlangano usungule inkundla enhle yokuxhumana okujulile phakathi kukaLujury nabaphakeli, futhi wafinyelela enhlosweni elindelekile yokwakhiwa kwemvumelwano nokuhlanganiswa okujulile. Ngemuva komhlangano, zonke izinhlangothi zithe bazothatha leli thuba ukuqinisa ukuxhumana futhi, bathuthukise umqondo wokubambisana, futhi basebenze ngokubambisana ukufezekisa isimo sokuwina esikhathini esizayo.